ko htike's prosaic collection: Myanmar rebel leader killed in Thai town
Myanmar rebel leader killed in Thai town
MAE SOT, Thailand (Reuters) - A leader of Myanmar's biggest rebel group was assassinated at his home in the Thai border town of Mae Sot on Thursday, his wife told Reuters. Pado Mahn Sha Lar Phan, secretary-general of the Karen National Union, was shot at his two-storey wooden home by two men who arrived inapickup truck, his wife Kim Suay told Reuters at the scene. He died instantly.
ဖဒိုမန်းရှာ လုပ်ကြံခံရ၊ သေဆုံး
လွှင့်တင်ချိန်။ ။ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ၁၇:၀၀ - မြန်မာစံတော်ချိန်
ကရင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်သည် ထိုင်းစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၄ နာရီ ၂ဝ ခန့်တွင် နေအိမ် အပေါ်ထပ်တွင် စာဖတ်နေစဉ် ကားဖြင့် ရောက်လာသော သေနတ်သမားများက အပေါ်ထပ် တက်လာပြီး သေနတ်ဖြင့် ပစ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အတိုင်း အစောင့်အကြပ် ထားရှိခြင်း မရှိသော နေအိမ်တွင် အောက်ထပ်တွင်သာ ရုံးဝန်ထမ်း ၂ ယောက်သာရှိရာ အလွယ်တကူ ဝင်ပစ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖဒိုမန်းရှာ၏ ရုပ်ကလပ်ကို နေအ်ိမ်တွင်ပင် ထားရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူ မဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး ယူကြုံးမရ ဖြစ်နေကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ဖိုးဝှီးကား အမဲရောင် နံပါတ် ၄၂၅ ဖြင့် ရောက်လာသော သေနတ်သမား ၂ ယောက်အနက် တဦးက အိမ်ပေါ် အရင်တက်လာပြီး ကျန်တဦးက ကရင်ဘာသာဖြင့် နေကောင်းလားဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရသော နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောပြီးနောက် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ နောက်ကျ တက်လိုက်လာသော သေနတ်သမားကလည်း ပစ်ခတ်သွားခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
၉ မမ ကျည်ဖူးတခုကို ယခုအချိန်တွင် တွေ့ရှိထားပြီး ထိုင်းရဲက စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု ဆက်လက် ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်ဟု အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သော မဇ္ဈိမ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက်က ကိုအောင်တင်က ပြောသည်။
blue painter said...
်အဲဒီခွေးမသား ၂ ယောက်က
ခွေးအစိုးရ ( နအဖ ) က